Mukhtaar Roobow oo kulan uu albaabada u xiran yahay la qaatay Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay K/Galbeed - Hablaha Media Network
Mukhtaar Roobow oo kulan uu albaabada u xiran yahay la qaatay Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay K/Galbeed
HMN:- Waxaa habeenimadii xalay kulan khaasa magaalada Muqdisho ku yeeshay Xildhibaanada labada Aqal ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed iyo wadaadka Mukhtaar Roobow ”Abuu Mansuur”.
Kulanka oo ahaa mid saacado qaatay ayaa waxa uu ka dhacay Hoteel Royal oo dhinaca ku haya Xarunta weyn ee Hay’adda Nabadsugida Qaranka.
Kulanka Xildhibaanada iyo Abuu Mansuur ayaa ahaa mid diirada lagu saarayay jabhadeynta wadaadka iyo suuragalnimada in Al-shabaab uu kasoo dhexsaaro dhalinyarada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ee loo adeegsado weerarada uu dhiiga badan ku daato.
Kulanka labada dhinac ayaa waxaa qeyb ka ahaa wadatashiyo ay Xildhibaanada la yeelanayeen Mukhtaar Roobow oo hadda wadahadal uu kala dhexeeyo dowlada Federaalka si loo soo gunaanado wadahadalka qabyada ah.
Xildhibaanada oo ay soo dirsatay dowlada ayaa sidoo kale la sheegay in wadaadka ay kala hadlayaan qodobo uu ka biya diidan yahay kuwaa oo ku xeeran dhanka amniga, iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay in Roobow uu aqbalo si uu u helo xoriyad taam ah.
Abuu Mansuur, ayaa Xildhibaanada qudhooda u dulmaray qodobada qaar ee uu diidan yahay iyo sababta uu ku diiday, si leysku barbar dhigo ciladaha uu tabanaayo wadaadka iyo qorshaha ay ka damacsan tahay dowlada.
Warar hoose oo aan ka helnay Xildhibaan qeyb ka ahaa kulanka ayaa sheegaya in Muqtaar Rooboow iyo madaxda dowladda qodobada ay hordhigtay ay ka mid ahaayen in Maleeshiyadkiisa ku sugan gobolka Bakool ay ka mid noqdan Ciidamada xoogga dalka iyo in isagu uu xil muhiim ah ka qabto dowladda.
Xildhibaanada ayaa Mukhtaar Roobow ku qanciyay qodobada qaar, waxaana lagu wadaa in leyskala gudbo qodobada uu aqbalay Roobow, si loo soo afjaro wadahadalada socda.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada Federaalka ayaa Mukhtaar Roobow u adeegsaneysa mas’uuliyiinta kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee xilalka ka haya dowlada.